4:15 am - Sunday September 24, 2017
Home » Cayaaraha » Cadaani oo markale isku sharaxay qabashada Hogaanka XKKS (SAWIRRO)
Guddoomiyaha waqtigiisu sii dhamaanaya ee Xiriirka Kubada Koleyga Soomaliya C/llaahi Nuur Maxamed (Cadaani) oo qado sharaf Magaalada Muqdisho ugu sameeyay kooxaha kala duwan ee u diinwaangashan XSKK ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan inuu markale qabto xilka Gudoomiyenimo ee Xiriirka Kubada Koleyga.
Qado sharafta uu sameeyay Cadaani ayaa waxaa kasoo qeyb galay masuuliyiin kala duwan oo isugu jiray Xildhibaano, Madax ka socotay Guddiga Olombikada Soomaaliyeed, maamulka kooxaha Kubdda Koleyga, khubaro isboorti iyo marti sharaf kale.
“Cidkasta oo Soomaali ah ayaa xaq u leh in ay utartanto Xilkan, Laakiin waxaan mar labaad u taaganahay oo aan rabaa in aan hogaamiyo XSKK, waxuuna codsigeyga ku wajahayn yahay 12-koox iyo Naadiyo isugu jira ee Xiriirka Kubadda Koleyga, kuwaasi oo xaq u leh in ay doortaan hogaanka xiriirka, Waxaan leeyahay xor baad u tihiin codkiina inaad doorataan cidda aad doontaan, balse waxaan idiin ka dalbanayan Codkiina, waxaana si aan gambad lahayn oo cod dheer ah halkan uga sheegayaan inaan ahay musharrax u taagan Guddoonka Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga,” Ayuu Yiri Guddoomiye Cadaani.
C/llaahi Nuur Maxamed (Cadaani) ayaa dhanka kale u mahad celiyay Kooxihii xilka u doortay 4-sano ka hor iyo Guddigii Fulinta XSKK oo uu sheegay in ay shaqo wanaagsan soo wada qabteen, waxuuna ballan qaaday haddii laga guuleysto uu si soomaalinimo iyo qadarin ku jirta uu ula shaqeyn doono cidda ka guuleysata.
Dhanka kale Xildhibaanad Dahabo Suusoow oo hore uga mid ahayd Ciyaartoydii Kubadda Koleyga oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay in bahda Kubadda Koleyga dal iyo dibad laga doonayo in ay u midowdo isla markaana kawada shaqeyso horumarinta isboortiga, lana garab qabto ciyaartayda garabka u baahan, waxayna intaa ku dartay in ay taageeri doonto masuul kasta ee kusoo baxa hogaanka XSKK.
Doorashada xiriirka soomaliyeed ee Kubadda Koleyga ayaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho lagu qabto 02-04-2017, iyadoona illaa iyo hada aysan jirin cid kale oo shaacisay in ay xilkaan u tartami doonto.